महिनावारी,बाट थाहा पाउन सक्छिन्, बाँझोपना छ कि छैन ? – Jagaran Nepal
महिनावारी,बाट थाहा पाउन सक्छिन्, बाँझोपना छ कि छैन ?
बाझोपन ! यो शब्दले संभवत सबै,भन्दा बढी महिला,लाई झस्काउने गर्छ । किनभने हरेक महिला प्रसव-पीडाको अनुभव लिन चाहन्छन् । सन्तान-सुखको अपेक्षा राख्छन् । आफ्नै कोख,बाट जन्मिएको बच्चालाई काखमा खेलाउने आकंक्षा राख्छन्।यस्तो अवस्थामा जब आफु सन्तान जन्माउन असक्षम छु भन्ने वोध हुन्छ, त्यो कुरा कुनैपनि महिलाले सहजै पचाउन सक्दैन ।तर, पचाउनैपर्ने वाध्यता आइलाग्छ कहिले काहीँ । किनभने कति महिलामा बाँझोपनको समस्या हुन्छ । किन बाँझोपन हुन्छ ? यसमा एउटा मात्र जवाफले पुग्दैन । कारण अनेक हुनसक्छ । यद्यपी आफुमा बाँझोपन भए, न’भएको संकेत भने उनीहरुले मासिक स्रावकै क्रममा थाहा पाउन सक्छन् ।यसका लागि महिलाहरुले महिनावारीका क्रममा हुने मासिक चक्रबारे ध्यान दिन जरुरी छ ।
कुनै महिलाको महिनावारी हुने समयको अन्तराल २५ देखि ३० दिन भन्दा धेरै छ भने त्यसले उक्त महिलामा ओभ्यूलेसन नियमित न’भएको जनाउ दिन्छ ।एक अध्ययनका अनुसार मासिक धर्म चक्र २५ दिन भन्दा कम रहने महिलामा २७ देखि २९ दिनसम्म उक्त चक्र रहनेको तुलनामा गर्भ बस्ने सम्भावना कम हुने गर्छ । त्यसबाहेक, तीस वर्षको उमेरका आसपासका महिलामा महिनावारी नियमित नभएमा त्यो पि्र-मेनोपौजको संकेत हुन’सक्छ ।
तौल नियन्त्रित गर्ने
करिब १२ प्रतिशत बाँझोपनामा तौल मुख्य कारण हुनेगर्छ । विशेषगरी, शरीरको तौल बढी भएमा शरीरको फ्याटले एस्ट्रोजेन नामक हर्मोनको उत्पादन गर्छ, जसले ओभ्यूलेशनलाई असर पुर्‍याउँछ ।
एक्ससाइजले पनि पार्छ असर
एक अध्ययनले जनाए अनुसार सातामा चार घण्टा दौडने वा एरोविक्स गर्ने महिलाको तुलनामा एक्सरसाइज नगर्ने महिलामा गर्भधारण गर्ने सम्भावना ४७ प्रतिशतले कम हुने गर्छ । तर, त्यो भन्दैमा धेरै वर्क’आउट गर्नै’पर्छ भन्न खोजेको हैन । धेरै वर्कआउट गर्नाले शरीरमा उर्जाको कम हुन’सक्छ र धेरै तनाव भएर प्रजनन क्षमतालाई प्रभावित पार्न सक्छ ।
गर्भनिरोधधक चक्कीको प्रयोग पनि बाझोपना हुनसक्छ ?
गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोगले बाझोपनाको समस्या निम्तने मानिसको आम धारणा छ । जबकी गर्भनिरोधक चक्कीको सेवनले गर्भधारणा गर्नमा कुनै समस्या हुँदैन । बरु यसको लगातारको प्रयोगले गर्भधारण गर्नमा सहयोग पुग्ने गर्छ ।एक शोधले जनाए अनुसार चार वर्ष भन्दा कम समय गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्ने महिलामा दुई वर्ष भन्दा कम समय यो चक्की सेवन गर्ने महिलाको तुलनामा गर्भवती हुने सम्भावना धेरै रहेको थियो ।उक्त शोधले जनाए अनुसार यस्ता चक्कीले ओभ्यूलेशन रोक्दछ भने केहीले अण्डालाई जिवित राख्नमा पनि मद्दत गर्दछ ।
वंशाणुगत कारणले पनि पार्नसक्छ असर
चाडै रजनोवृत्ति हुने आमाहरुमा उनीहरुबाट जन्मने सन्तानमा पनि छिटो रजनोवृत्ति हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यस्तै, परिवारमा कसैलाई बाझोपनाको समस्या छ भने परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि बाझोपनाको समस्या हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसबाहेक फाइब्राइड, एंडोमेटि्रयोसिस जस्ता समस्या पनि वंशाणुगत कारणले हुने भएकोले यस्ता कुरामा ध्यान दिएर पनि महिलाहरुले आफूमा बाझोपनाको समस्या छ कि छैन थाहा पाउन सक्छन् ।